Real-Oge Mobile Mgbasa ozi esighi na site Zapp360 | Martech Zone
Ogbogu 360 na-agbanwe ụzọ esi enyefe ndị na-azụ ahịa mgbasa ozi gbasara usoro nhazi na mkpa. Omenala mgbasa ozi nke ọdịnala na-agụnye ụlọ ọrụ naanị iji mgbasa ozi ihe nchọgharị na desktọọpụ - emezighị emezi, na-echeghị ya na echeghị otu ndị ọrụ si etinye aka na obere enyo.
Mgbasa ozi ekwentị bụ ụlọ ọrụ ijeri $ 14.3 na amụma niile bụ na ọ ga-aga n'ihu na-eto eto, mana nke a agaghị eme ruo mgbe enwetara ahụmịhe onye ọrụ ikpeazụ na n'ihu. Ya mere, Zapp laghachitere n’ihu site na imeputa ihe odide ederede nke na-agbaputa nkwukọrịta na ngwa ngwa na onodu nke onye ọrụ… nke di n’oge.
Otu n'ime ihe dị iche iche dị iche iche maka ikpo okwu bụ ọsọ ọsọ nke mgbasa ozi nwere ike ịga. Ihe ngosi, ma ọ bụ mgbasa ozi ọhụụ na-ewe oge iji dọkọta ọnụ, mana ederede, dị mfe dịka ọ na-abịa. Ma nye otu ndi mmadu si ekwuputa okwu site na twitter taa, ederede bu ihe nkwukọrịta nke na-adigide n’oge ma dịkwa mkpa nye ndị na-ege ntị n’ebe niile.
The Ogbogu 360 ikpo okwu na-anapụta ozi mpịakọta na-adịghị egbochi nke ihe ruru mkpụrụedemede 140 agbakwunyere n'ime ihe nchọgharị ekwentị ma ọ bụ ngwa ngwa ndị ahịa na oge nke ndị mgbasa ozi kwuru. Ndị ahịa nwere ike pịa ozi ahụ ka ịnyagharịa ebe, kpọọ oku, lee vidiyo, gbapụta dere ma ọ bụ rute na weebụsaịtị nke ndị mgbasa ozi. Ọkwa ngwa ngwa a na mmekọrịta mmekọrịta a na - eme ka ahụmịhe bara ọgaranya karịa ma na - anapụta ndị ntụgharị agbanweela nkezi ụlọ ọrụ.
Ikpokoro Zapp360 nke na-anọdụ n’azụ mgbasa ozi dị mfe ịtọlite, jikwaa, na ịlele ezubere iche maka mgbasa ozi mgbasa ozi mkpanaka n’oge (CTRs wdg) yabụ na ị naghị echere mkpesa na ngwụcha mkpọsa ahụ iji chọpụta ma ọ na-arụ ọrụ. ma ọ bụ ọ bụghị.
Mgbasa ozi ndị ahụ dị mfe maka ụlọ ọrụ na ụdị ịtọlite ​​ma mepụta. Dịka ọmụmaatụ - ọ bụrụ na akụkọ akụkọ mebie, ihe omume na-eme, ma ọ bụ ọbụlagodi ihu igwe na-aka njọ, na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha metụtara ọnọdụ ahụ, ha nwere ike ịzaghachi ozugbo (ma ọ bụ ozugbo ha nwere ike bia na pithy ad na odide 140 ma obu obere).
nnoo, Ogbogu 360 dị ka onye ọrụ enyi na enyi maka ad njikwa dịka ọ bụ maka onye ọrụ njedebe na-elele ad. Chee echiche banyere ya dị ka tweet na ị nwere ike ịgafe ibe weebụ dị mkpa na ihe nchọgharị mkpanaka nke ndị na-azụ ahịa na-elele. Mputa ozi di nkenke na oku ime ihe n’ebe ị na-emebu. Site na mgbasa ozi mkpanaka oge, onye na-ere ahịa nwere ike ime ka mmekọrịta dị mma ma baa ọgaranya n'etiti ndị na-azụ ahịa na mgbasa ozi ha na-ahụ, ebe ọ bụ na ha na-adịkwu oge.
Tags: network ad networkmobile mgbasa oziozugboObinna 360